Wedzera Urongwa Hwako Hwepasi kuGoogle Mepu | Martech Zone
Chipiri, Mbudzi 27, 2012 Mugovera, Mbudzi 24, 2012 Douglas Karr
Kunyangwe iwe uri nzvimbo yekutengesera inoda mepu zvitoro zvako, nzvimbo yekutengesa iyo inoda kuisa mepu madhipatimendi ako, kana chivakwa chebhizimusi chinoshuvira mepu varidzi vayo, inguva yekuendesa mapurani ako epasi kuGoogle Mepu Zvirongwa.
Iwe unogona kunge wakacherekedza kuti zvimwe zvitoro zvekutengesa, semamall mall, zvakatanga kutora mepu zvivakwa mukati mezvitoro. Parizvino, zvinoita kunge zvisiri chaizvo, hazvo, uye pamwe ndosaka Google ichiivhurira vashandisi kurodha yavo yega mapurani! Ichi chifananidzo cheedu mall mall hachiite senge chine zvitoro zvazvino - uye nzvimbo dzezvitoro izvo hadzisi idzo.
Kana iwe usina mifananidzo yakajairwa yezvirongwa zvako zvepasi zvekuisa, haufanirwe kunetseka. Iwe unogona kuvaka yako yepasi chirongwa uchishandisa chishandiso senge Gliffy.
Paunenge uchinge waronga pasi kutaridzika zvakanaka, iwe unongofanirwa kuendesa kunze seyakajairika mufananidzo faira. Tumira kunze chirongwa chepasi, chiise pasi kuburikidza neGoogle Mepu Zvirongwa, uye uzviputire pane iyo chivakwa.
Sezvo maapplication emafoni achiwedzera nekuwedzera kurongeka, uye kugamuchirwa kwemamepu uye geolocation masevhisi akakwira, wadii kuona kuti mapurani ako epasi akanyatsoratidzwa! Izvo zvinogona kuunza yakawanda traffic kunzvimbo yako ... pasina kushushikana kwekusaiwana pamepu!
Tags: gadzira pasi chirongwakutumira kunze kwepasi chirongwahurongwa hwepasigoogle Mapsmapupload pasi chirongwa
Nov 27, 2012 pa11: 51AM
Zvakadii nevaki vekumba? Vanogona here kuisa pasi avo mapurani kuenda kuGoogle mepu yemafecs? Kune dzimba dzisati dzavakwa… senzira yekutsvaga injini? Zvakakodzera kuyedzwa pamwe